Maxamed Dheere iyo Indhacade oo heshiis kama dambeysa Nairobi ku gaaraya
Buluugleey, December 27, 2005
Waxaa la filayaa dhowaan in Maxamed Dheere uu u kicitimo Nairobi si uu u soo dhameeyo heshiis buuxa oo uu la gaaro Indhacade. Magaalada Nairobi waxaa horay u jooga Indhacade oo halkaas ku sugaya Maxamed dheere.
Maxamed Dheere ayaa naf iyo hantiba u huray garabka uu hogaamiyo Col. C/llahi Yusuf oo xaruun ka dhigtay Jowhar, waxaana isi soo tarayey bilihii dambe abaaldhac weyn oo loo hayey Maxamed Dheere. Gudoomiyaha gobolka Sh/ Dhexe ayaa u soo dulqaatay isku day badan oo lagu damacsanaa in lagu yareeyo awoodiisa. Warar aan la hubin ayaa sheegay in Maxamed Dheere uu ka badbaaday shirqool ay Jurille iyo C/llahi Shiikh Ismaciil ay ku doonayeen in Adisabab ay ku xiraan dhowaan markii ay dowladda Itoobiya ay u soo dirtay casumaad.
Maxamed dheere oo Col. C/llahi uga soo go’ay kooxda ay isku heybta yihiin ee awooda ku leh magaalada Muqdisho ayaa dareemay wejiga runta ah ee C/llahi Yusuf. Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Bari ayaa qorshahoodu ahaa in Maxamed Dheere dagaal looga horgeeyo walaalihiisa Muqdisho.
Maxamed Dheere ayaa la soo baxay siyaasad culus kadib markii uu ka soo laabatay Itoobiya, wuxuuna xooga saaray nidaamka dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada dadka ay heybwadaagta yihiin. Arrintaas ayaa waxey ka careysiisay kooxda C/llahi Yuusuf u qorsheeya dabinada, kuna tilmaamay Maxamed Dheere howsha uu wado mid aan loo dirsan.
Heshiiska uu doonayo Maxamed Dheere inuu la galo Indhacade ayaa ka durugsan inta la maleynayo. Maxamed Dheere aya waxaa u muuqatay sida C/llahi Yusuf uu u damacsan yahay in gobolada koofureed, gaar ahaan degaanka webiga Jubba iney noqoto meel ay wadaagaan dadka ay isku heybta guud yihiin, lagana soo saaro dadka kale , gaar ahaan kuwa ka soo jeeda degaanka Muqdisho.
Heshiiska Maxamed Dheere iyo Indhacade ayaa salka ku haya isbaheysi cusub oo ku dhisan cudud, kaas oo ay labada dhinac iska kaashanayaan iney xagga difaaca iska kaashadaan haddii mid ka mida dagaal lagu soo qaado. Ujeedaduna waa in la iska caabiyo haddii ciidanka Barre Hiiraale ama ciidanka C/llahi ee jooga Jowhar ay soo weeraraan xaruunta maamulada goboladaas.
Barre Hiiraale ayaa wuxuu ku qancinayaa C/llahi Yusuf inuu isaga soo tago Jowhar, xaruuna ka dhigto Kismaayo, Sidoo kale ayuu C/llahi ugu qancinayaa Barre Hiiraale inuu ka baxo isbaheysiga uu la leeyahay qoloyinka ka soo jeeda Muqdisho.
Heshiiska Maxamed Dheere iyo Indhacade ayaa la saadaalinaya inuu dhabarjab ku yahay masiibadii uu C/llahi damacsanaa inuu ka huriyo degaanka Xamar. Sidoo kale isbaheysiga ciidan oo ka dhasha heshiiskooda ayaa ah cudud xoogan oo miisaan culus wadata.